တဏှာ | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
Tag Archives: တဏှာ
နိဗ္ဗာန်၏အနက်အဓိပ္ပာယ် နိဗ္ဗာန်၌ဘာမှမရှိဆိုရာ၌ ဘာဆိုသော စကားလုံးကို အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ရန်လိုသည်။ ဥပမာ — နိဗ္ဗာန်၌ ဘာဒုက္ခမှ မရှိ၊ မှန်သည်။ ဘာတဏှာမှ မရှိ၊ မှန်သည်။ ဘာရုပ်နာမ်မှ မရှိ၊ မှန်သည်။ ဘာလောကဓံမှ မရှိ၊ မှန်သည်။ ဤသို့ သုံးနှုန်းလျှင် ရသည်။ သို့သော် နိဗ္ဗာန်၌ ဘာသုခမှ မရှိဆိုလျှင် မှားသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် နိဗ္ဗာနံ ပရမံ သုခံ ဖြစ်သည်။ စစ်မှန်သော Tags: Buddhism, Myanmar Posts, တဏှာ, … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, တဏှာ, နိဗ္ဗာန်	| Leaveacomment
Approaching Nirvana (4)
Approaching Nirvana (4) Nirvana is our Goal. Buddhists are aiming Nirvana by hook or by crook. To attain Nirvana, we must negate our ego by sacrificing egocentric interest including sexual feelings, and then we can have the power to attain … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged English Posts, တဏှာ, နိဗ္ဗာန်, မဂ်ဉာဏ်၊ ဖိုလ်ဉာဏ်	| Leaveacomment
ချမ်းသာခြင်းနှစ်မျိုးသိခြင်းနှစ်မျိုး ချမ်းသာခြင်းနှစ်မျိုး ရှိသည် – (စက္ခု သောတ ဃာန ဇီဝှါ ကာယ မန) ဟူသော အာရုံခြောက်ပါးနှင့် ချမ်းသာခြင်းက တစ်မျိုး၊ ထိုရုပ်နာမ်မှ သီးခြားကင်းလွတ်၍ မဂ်ချမ်းသာ ဖိုလ်ချမ်းသာ နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို ဝင်စားသည့် ချမ်းသာခြင်းက တစ်မျိုးဟူ၍ (ဝေဒရိက သုခ၊ သန္တိသုခ) ဟူ၍ ချမ်းသာခြင်းနှစ်မျိုး ခွဲခြားနိုင်သည်။ ချမ်းသာတကာ့ ချမ်းသာတို့တွင် နိဗ္ဗာန်သည် အမြတ်ဆုံး ချမ်းသာခြင်းဖြစ်သည်။ နိဗ္ဗာနံ ပရမံသုခံ ဟူ၍ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်နိုင်သည်။ သိခြင်း … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, တဏှာ, နိဗ္ဗာန်, မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်, မြတ်စွာဘုရား	| Leaveacomment
ဗုဒ္ဓဘာသာထဲကဘဝတစ်ခု အပိုင်း(၉) တိုက်ပွဲဝင်ဝိပဿနာသမား ယခုအခါ တိုက်ပွဲဝင်ဝိပဿနာသမား အကြောင်းကို ရေးသားချယ်မှုန်း နေပါသည်။ ဝိပဿနာသမား၏ ရန်သူဖြစ်သော အဝိဇ္ဇာနှင့် တဏှာကို တိုက်ခိုက်ပုံများအား တတ်နိုင်သမျှ အသေးစိပ် စီကုံးနှုန်းဖွဲ့ နေပါသည်။ ဤအခြေအနေ၌ ရုပ်နာမ်အား ဒုက္ခရန်သူဟု ခံယူထားရလေရာ ရုပ်နာမ်ချမ်းသာနှင့် လူ့အခွင့်အရေး ဆိုသည်များကိုတော့မူ ခေတ္တခဏ ဘေးချိပ်ထားရမည်ကဲ့သို့ ဖြစ်နေပါသည်။ စာရှုသူများကိုလည်း မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ ယခုအခါ တိုက်ပွဲဝင်ဝိပဿနာ အကြောင်းကိုသာ စီကုံးနှုန်းဖွဲ့ရသည်ဖြစ်၍ မိမိ နှလုံးသား၌ဖြစ်စေ၊ ဟဒယ၌ဖြစ်စေ ကျူးကျော်ဝင်ရောက် လာမည်ဖြစ်သော အဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာကို တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းရန် … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, တဏှာ, အ၀ိဇ္ဇာ	| Leaveacomment
ဗုဒ္ဓဘာသာထဲကဘဝတစ်ခု အပိုင်း(၈) အဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာအရေးကြီးပုံ ဝိပဿနာယောဂီများအတွက် အဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာသည် အရေးကြီးကြောင်း သတိပြုရန် လိုပေသည်။ ဝိပဿနာယောဂီများသည် ကိလေသာ လျော့ပါးရေးကို ကြိုးစားကြသည်။ သို့သော် အဝိဇ္ဇာနှင့် တဏှာမှာမူ လွန်စွာလည်သည်၊ လွန်စွာ ပါးနပ်သည်၊ လွန်စွာ လျှင်သည်၊ ယောဂီများ သတိမရှိနိုင်မီ အဝိဇ္ဇာက လွှမ်းတတ်သည်၊ တဏှာကလည်း နေရာယူတတ်သည်။ ထိုအခါ ယောဂီများ အခက်အခဲ ဖြစ်နိုင်သည်။ ယောဂီတိုင်းလိုလို အခက်အခဲ ရှိနိုင်လိမ့်မယ်ဟုတော့ ယူဆပါသည်။ အချို့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် ဖြစ်ပါသည်။ အဝိဇ္ဇာမှာမူ လွန်စွာ နူးညံ့သဖြင့် … Continue reading →
ပန်းတိုင်(၂) ပန်းတိုင်အကြောင်းကို ဗုဒ္ဓဘာသာ ရှုဒေါင့်မှ ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာတို့၏ ပန်းတိုင်သည် နိဗ္ဗာန်ဖြစ်သည်။ နိဗ္ဗာန်ကို စံမြန်းသောအခါ ရုပ်နာမ်ချုပ်သွားသည်။ အရဟတ္တ မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်ဖြင့် နိဗ္ဗာန်စံမြန်း၍ နောက်ဆုံး အနုပါဒိသေသ နိဗ္ဗာန်သို့ စံမြန်းသွားရသည်။ သံသရာ ပြန်လှည့် မလာတော့ချေ၊ ရုပ်နာမ်ထပ်မဖြစ်တော့ချေ၊ ယင်းကား အဆုံးနိဂုံးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာတို့၏ ပန်းတိုင်သည် နိဗ္ဗာန်ဖြစ်သည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များမှာမူ ပန်းတိုင်နှင့် ပတ်သက်၍ အဆိုအမိန့်များ အချို့ကို ချန်ထားခဲ့ရာ လောကီလိုင်းအတွက် သက်သက်ကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည်။ ဥပမာ … Continue reading →
Posted in Buddhism & Science	| Tagged Buddhism and Science, Myanmar Posts, စတီဖင်ဟော့ကင်း, တဏှာ, နိဗ္ဗာန်, ဗုဒ္ဓဘာသာ, မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်, အနုပါဒိသေသ နိဗ္ဗာန်	| Leaveacomment
သစ္စာတရားရှာဖွေရာ၌ တိကျသောအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ လိုအပ်ခြင်း(၂) နိဗ္ဗာန်ဆိုသောစကားကို တချိန်က (Nothingness) ဟု ဘာသာပြန်လိုက်ကြသည်။ ထိုအခါ နိဗ္ဗာန်၌ ဘာမှမရှိဟူသော သဘောအယူအဆ အနည်းငယ် လွှမ်းမိုးလာသည်။ အမှန်မှာ နိဗ္ဗာန်၌ ဘာမှမရှိခြင်း မဟုတ်၊ ဘာဒုက္ခမှ မရှိ၊ ဘာရုပ်နာမ်မှ မရှိ၊ ဘာကိလေသာ တဏှာမှ မရှိဟူ၍သာ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ရသည်။ နိဗ္ဗာန်၏ မူရင်းမှာ နိ ဝါန ဖြစ်၍၊ နိ ဝါန ဆိုသည်မှာ – နိ= မရှိခြင်း ဝါန= … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, တဏှာ, နိဗ္ဗာန်	| 1 Comment
ဉာဏ်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ အခန်း (၂) ဆရာမြတ်၏ အဆုံးအမများ (က) သံသရာဘေး၏ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းပုံ။ (ခ) အကုသိုလ်မီးများသိပ်သည်းကျစ်လစ်ပုံ။ (ဂ) သေခြင်းတရား၏ ဆိုးဝါပုံ။ (ဃ) လောကဓံ လှိုင်းဂယက်များ။ (င) တရားရှင်ဖြစ်ရန် ကြိုးစားနေသူတို့၏အမြင်။ (စ) အသေစိတ်ချရသူနှင့် အသေစိတ်မချရသူ။ ဆရာမြတ်ထံ တပည့်ခံ၍ ၀ိပဿနာတရား ကျင့်ကြံအားထုတ်ရာ၌ ဦးတည်ချက် ရည်ရွယ်ချက်များ ထားရှိရန်လိုအပ်ကြောင်း ဆုံးမတော်မူသည်။ သံသရာမှ ထွက်မြောက်ရန် ဆန္ဒရှိကြသော စာရေးသူတို့အတွက် သံသရာ လွတ်ကြောင်းမှတပါး အခြားသို့ အာရုံမပြုရပါ။ … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, ဉာဏ်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ, တဏှာ, အတ္တ	| Leaveacomment
အခေါင်မြတ်ပန်း အောင်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ – 20
Posted on June 14, 2011 by chitnge
အခေါင်မြတ်ပန်း အောင်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ အခန်း(၁၅) ( ဒေါက်တာချစ်ငယ် ၏ ငယ်မူ ကလောင်ခွဲ လက်ရာများ ) ချမ်းသာစေလိုသော စေတနာရှင် မေတ္တာရှင် အပိုင်း(၁) ဆရာသည် အမြော်အမြင် သိပ်ကြီးတော်မူလေသည်။ ဉာဏ်ပညာလွန်စွာမှ ထူးခြားထက်မြက် ထွန်းတောက်သော ပညာရှိကြီးဖြစ်လေသည်။ အရာရာကို လေးနက်စွာခံယူ၍ နက်နဲသော အသိတရား ကိန်းဝပ်လေသည်။ မြတ်စွာဘုရားကို ကြည်ညိုရာ၌ အနှစ်သာရပိုင်း အဓိကပိုင်းတို့ကို လုပ်ဆောင် လေသည်။ ပဋိပတ်ကျင့်စဉ် အလုပ်ခွင်ကို ဉာဏ်ယှဉ်၍ ဦးဆောင်တော်မူခဲ့လေသည်။ ဆရာ့ လက်အောက်၌ စာရေးသူတို့လို ၀ိပဿနာ … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, ဆရာမြတ်ကြီး, တဏှာ, အ၀ိဇ္ဇာ, ရွှေစာမျက်နှာများ	| Leaveacomment